Computer & Laptop ကျန်းမာရေး – YANGON STYLE
Computer & Laptop ကျန်းမာရေး
Laptop တစ်လုံး ပျက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရမ်းတွေလေးပြီး ဟန်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ ပြင်မလား၊ ဝယ်မလား။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဈေးတွေကကြီးတာရယ် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို စိတ်မချတာရယ်နဲ့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ Laptop ကလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးလိုပါပဲ။ ရောဂါတစ်ခုကို ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းက ပိုပြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ Laptop ရဲ့ ကျန်းမားရေးကိုလည်း ကုသမှုမရှိရအောင် ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Laptop ကို နည်းစနစ်မှန်ကန်အောင် အသုံးပြုခြင်းနည်းများကို သိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေပေးပါမယ်။
Laptop ရဲ့ Battery ကို လက်ကျန် 20% အထိ အနည်းဆုံးချန်ပြီး အသုံးပြုပေးပါ။ 20% ထက် အောက်ကျသွားခြင်း၊ 0% ဖြစ်သွားပြီး ပိတ်သွားသည်အထိ အသုံးပြုခြင်းမျိုးကို အထူးရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ 20% ဖြစ်သွားပါက အားပြန်သွင်းပါ။ ပြည့်သွားလျှင် Power Plug ကို ပြန်ဖြုတ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ။ Power Plug ကို အမြဲတပ်၍ အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြည်ရပါမယ်။ Battery ရဲ့ သဘောသဘာဝမှာ အားသွင်းထားပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုမှသာ Battery Cells များသည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သောကြောင့် Battery ကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ အားသွင်းရာတွင် မှန်ကန်သော Power Adapter များဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Optical Drive များ အသုံးပြုရာတွင် အစင်းရာအခြစ်ရာများရှိသော၊ ညစ်ပတ်နေသော CD/DVD အခွေများကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ Original CD/DVD များ အသုံးပြုခြင်းက Optical Drive ကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
Laptop အသုံးပြုသည့်အချိန် ကြာမြင့်လာပါက ဖုန်မှုန့်များရှိနေနိုင်သည့်အတွက် Service Center ကို ၁ နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ်ခန့် သွားရောက်၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ Laptop အသုံးပြုနေသည့် အနီးအနားတွင် ကော်ဖီ၊ ရေ စသည့် အရည်များ၊ အစားအစာများကို မထားသင့်ပါ။ ဖိတ်စင်မှုရှိခဲ့လျှင် Power လုံးဝမဖွင့်ဘဲ Service Center သို့ ချက်ခြင်းပို့၍ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Power ဖွင့်ထားသည့် အချိန်တွင် Laptop ကို ပြင်းထန်စွာရွေ့လျားခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအနေအထားဖြင့် ကိုင်တွယ်ခြင်းကြောင့် (Harddisk) ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ( HP Pavilion Series ) များတွင် Protect Smart Technology ဖြင့် Laptop သုံးစွဲမှု ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသွားပါက အလိုအလျောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် နည်းပညာပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Computer ကို အသုံးပြုမှုများသော သူများအတွက် စက်ဟန်းခြင်း၊ လေးခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်အောင် စက်ကိုတစ်ပတ်လျှင် (၃) ကြိမ်၊ (၄) ကြိမ်လောက် သန့်ရှင်းပေးရပါမယ်။ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နည်းကို မသိသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါမယ်။
1. Window + R ကို တွဲနှိပ်ပါ။
2. ပေါ်လာတဲ့ Box လေးထဲမှာ recent လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။
3. ကျလာမယ့် File တွေအားလုံးကို Shift + A တွဲနှိပ်ပီး Select မှတ်ပါ။
4. File အားလုံး Select ဝင်သွားလျှင် Shift + Delete တွဲနှိပ်လျှင် အားလုံးရှင်းသွားပါမယ်။
ထိုနည်းအတိုင်း Window + R နှိပ်လို့ကျလာမယ့် Box ထဲမှာ temp၊ prefetch၊ %temp% တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လှည့်စီ အပေါ်ကနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးလျှင် စက်ဟန်းခြင်း၊ လေးခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။